Abaqalayo abadubula nabathandi bebhamu babesaba nombuzo: kanjani ukudubula i-PM ngokunembile? Ukuxhaphaza kuhlanganisa izinto eziningana, kufaka phakathi ukuhloswa, ukuhleleka kwesimo, ukuhloswe kanye namakhono wokwenza umsebenzi ngokubheka izici zesiphathi. Cabanga ngezici zokudubula ebangeni lokudubula, kanye namasu afanele nemithetho yokuphatha izikhali.
Yini eyoyadingeka ukuze uqeqeshe?
Ngaphambi kokufunda ukudubula kahle kusuka ku- PM (i-Makarov pistol), kuzodingeka uthenge izinsimbi eziningi. Lokhu kufaka:
Ngokuqondile isibhamu ngokwayo.
I-Balloon ye-model model.
I-Target yokufometha ifomethi A4.
Uma udinga ukufinyelela okusheshayo kwezikhali ekhaya noma emotweni, kuhle ukuthenga umnikazi wesibhamu. Ngaphezu kwalokho, amadivayisi athuthukisa ukusebenza kwedivayisi angadingeka. Ake sicabangele izici zabo ngezansi.
Ukuguqulwa PM-49 kungahlomele imishini elandelayo:
Ukubona kombono ebusuku, okudingekayo ukuze hit ngokuqondile kulitshe uma kungekho ukukhanya okudingekayo noma ebumnyameni. Izinkinga zaleli divayisi zihlanganisa ukusebenza kahle okuphansi kwimodi yokukhanyisa encane futhi kusihlwa. Idivayisi ayivumeli ukunikeza ukubonakala okwanele ekuboniseni ukukhanya kwelanga lapho ukukhanya kwemvelo okwanele okwamanje. Njengomthetho, ukubona okunjalo kwenza kube lula ukubona uhlaka olucacile lwesitshelwa ngaphakathi kwamamitha ambalwa.
Amaqhinga okukhanya okubhebhethekisiwe. Benza njengegama eliqhakazile futhi elihlose, futhi kuyindlela eyengeziwe yokuvikela ukuvikela. Uma uhambisa ukukhanya kokukhanya kwesitha emehlweni, lo muntu ulahlekelwa umonakalo okwesikhashana. Izithiyo ze-element zifaka izikhali ezinzima kakhulu.
Kuyafaneleka ngenxa yokuzala. Iqukethe ukulungiswa kwe-hook yesibhamu noma ukunciphisa isifo sayo. Lezi zanamuhla zikuvumela ukuba uhlasele ngokunembile ilitshe. Ngaphezu kwalokho, ukulandelana kwezibhamu kuyanda, futhi ukunyakaza kwe-trigger ne-fuse kuyakusiza. Ukuthuthukiswa okunjalo kuyadingeka ezimweni ezihlukile.
Ukudubula emgqeni ovela esihlakalweni sokulwa sohlobo lwe-PM senziwa lula ngamapayipi emigodla ezinxenyeni eziseceleni zesibambo. Kulesi simo, isibhamu siba lula kakhulu ukugcinwa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu kubasebenzisi abanokuqonda okubanzi kwesandla. Noma kunjalo, kubalulekile ukuqapha lezi zakhi, ukuhlola ukulungiswa kwazo nokuhlanzeka.
Uma ukudubula, izinyathelo zokuphepha eziyisisekelo kufanele zilandelwe:
Abantu abangazange baqeqeshwe ekusetshenzisweni kwezikhali abavunyelwe ukuxoshwa. Noma yikuphi ukudubula kufanele wazi izinyathelo zokuphepha, imithetho yokushaja nokukhipha isibhamu, kanye nendlela edidekile futhi ehlangene ngayo. Ngaphezu kwalokho, kuzodingeka ukuthi ufunde izici ezakhiwe zethuluzi.
Ukuzwakala komshini wokudubula kungadala umsebenzisi. Kule ndaba, ezindaweni zokuzibuyisa ezizimele, kufanele kusetshenziswe i-headphone ekhethekile. Ngaphambi kokuqala ukudubula, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi kude namamitha ayikhulu eseduze akukho abantu abangaziwa noma izilwane.
I-cartridge kufanele iqukathe i-cartridges ehambelana nohlobo nokulinganisa kwesikhali. Ungasebenzisi amabhulogi angafaki noma angafanele emingcele yezobuchwepheshe.
Imodeli engalungile ayinqatshelwe ukusebenzisa ngokudubula.
Ukuze ukwazi ukudubula i-PM ngendlela efanele, kufanele ucabangele amaphuzu alandelayo:
Uma i-fuse ingasebenzi, kuyadingeka ukuthi uhlole isikhundla sefulegi yokulungiswa, okumele ihlehliswe ekumeni. Ngaphandle kokulungisa, awukwazi ukudubula.
Ungavali umgqomo ngesandla sakho noma yiziphi izinto zangaphandle. Lokhu kungaholela ekuthuthukiseni noma ekuqhekekeni kwesikhali.
Ngaphambi kokusebenzisa ibhasi lika-PM-49 noma ezinye izinguquko, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ingxenye esebenzayo ihlanzekile. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ama-rags nomhlanzi wokuhlanza.
Uma uphinde ulayishe kabusha isibhamu, umgqomo kufanele uqondiswe ohlangothini oluhlosiwe lwesibhamu.
Ngaphambi kokuhlanza, ukuhlakaza, noma ukwenza ezinye izinyathelo ngezikhali, kumele kuqinisekiswe ukuthi kukhishwa.
Uma ufuna ukudlulisa isibhamu kusuka kokubekwe eceleni ukulwa nesimo, sebenzisa i-fuse, ungafaki isibhamu kubantu.
Ukuze ugweme ukuthola ukulimala komshini, udinga ukuqapha isikhundla sezandla ngesikhathi sokudubula. Iminwe kufanele ibe ngaphandle kwendawo yokukhululwa kwe-shutter.
Isitoreji sezikhali kufanele senziwe endaweni ephephile ezingenakubalwa kwezingane. Njengomthetho, lokhu kuyindawo ephephile noma ekhethiwe ngokukhiya.
Indlela yokudubula i-PM ngokunembile?
Ukuze bathole amakhono okudubula, abaningi bakhetha igalari yokudubula. Kodwa-ke, akuvamile ukuthi uthole indawo efanelekile. Kuzoba nzima nakakhulu kubacibisholi abasha, abaphazamiseka abanye abantu noma ababukeli. Ngaphambi kokusebenzisa isikhali, ngisho ne-pneumatic, funda incwadi yokufundisa kanye nemithetho ensimini efanele.
Kusukela ukufunda ukudubula kusuka ku-PM endaweni yemvelo, yebo, ngeke kusebenze, kuzodingeka ukuthi uthole indawo efanelekile yalokhu. Njengendlela yokudubula kufanelekile ukuhlanzwa okukhulu, okungekho ezinye izakhamizi noma izilwane. Ukuqala ukudubula kuyisifiso emva kokunwetshwa kwamalunga nama-muscle. Okumangalisa ukuthi kuzosiza ukuqinisa nokwenza izandla nomzimba uzinze.
Ukuze ukwazi ukushaya ilitshe ngokunembile, kubalulekile ukuzwa umsebenzi kanye nezici zesikhali, kanye nokuhamba ibanga ukuya kwelitshe. Ngokuba isibhamu esicatshangelwayo, asishiya ngaphezu kwamamitha angu-15. Njengoba ufunde ukudubula nokuchithwa kuleli banga, ungazama inhlanhla yakho kude.
Umuntu angakwazi ukuqonda amakhono okudubula kuphela ngemva kokutadisha izici zezikhali ezisetshenziswayo. Ngokuvamile kwenzeka ukuze umthumeli aphume ngokuphelele lapho ehlose khona. Ukuxazulula le nkinga kukwanele ukunquma ibanga eliqondile phakathi kwehlongo kanye nesibhamu.
Ukudubula kokuqala kunconywa ibanga elingamamitha angaba ngu-25. Ngemuva kokuba umuntu efunda ukungena ezingeni elingamamentimitha angu-50 ububanzi, angakwazi ukuhamba ibanga elibhekiswe kulitshe, ecabangela umonakalo omkhulu ovela esikhali esetshenziswayo. Ngaphambi kokusebenzisa ama-specimens ezempi, kubalulekile ukutadisha izinyathelo zokuphepha nezindlela zokuhlinzeka usizo lokuqala uma kwenzeka ukwelashwa okungalungile.
Ukudubula kusuka esikhundleni sokuma
Kulesi simo, kunconywa ukuba wenze ukuhlukumeza kulokhu kulandelana:
Beka ububanzi bezintambo zakho ububanzi.
Uma uphendukela ngakwesobunxele, umlenze wesokudla uhlala endaweni, futhi umlenze wesobunxele uhamba ukuze uhlale ukhululekile. Le rack yenzelwe abantu abanamalungelo.
Lapho wenza izenzo ezifanayo ngokuhlelwa kwesibuko.
Ngaphambi kokudubula, kufanele uvule ikhava ye-holster bese uphuma isibhamu.
Isandla sibheke ngqo ezingeni elibhekiswe kulo, isibhamu esiphethweni singasebenzi, imisipha yesandla ihlala esimweni esicindezelekile.
Ukuze kube lula, ungabeka isandla esingenzi ukusebenza ngemuva kwakho.
Ngemuva kokuhlosisa, kudutshulwe ukuphuma.
Isikhundla "off the knee"
Lolu hlobo lokudubula luqhutshwa ngezigaba ezilandelayo:
Okokuqala, umlenze wesobunxele unxeba ngemuva kwesigungu esifanele. Kulesi simo, kufanele kuvezwe umugqa ocacile ocacile, ibanga eliphakathi kwemilenze cishe lilingana nobubanzi bamahlombe.
Khona-ke kufanele uguqe phansi, unikeze idolo lakho langakwesokudla phansi. Njengesekelo, isithende sezinyawo zokunene sisetshenziswa. Izinyawo kufanele ziqonde, futhi amasokisi akhomba ekuqondeni kwelitshe.
Isibhamu siyasuswa, sisuswe ku-fuse, kudutshulwa.
Isimo esinjalo sokudutshulwa sidinga ukuqeqeshwa okuningi, emva kwalokho umshayeli webhayisikili angakwazi ukuphuma emilenzeni egobile, ukushintsha izikhundla nokuqondisa komlilo.
Ukuqhuba ukudubula kusuka endaweni yokulala
Okulandelayo, cabanga ukuthi ungabhekana kanjani nesibhamu esesimweni sokulala:
Umlenze wesokudla uhanjiswe ngokuphambuka okuncane ohlangothini.
I-casing igcinwa ngokuqondile.
Khona-ke kudingekile ukuba uhlale phansi emgqeni wesobunxele bese ucike phezulu ebusweni ngesandla esifanayo. Beka inyawo lakho lokunene phambili, ukulihlanekezela kancane ngakwesokudla. Ukugcizelela isikhali kufanele kuwele endaweni engaphambili kanye nesikhumba.
Thatha isikhundla esilahlekile sokulala (kubantu abalungile-ke lokhu yisikhundla ngakwesokunxele).
Umzimba kufanele uphendukele ekuqondeni, ucike emlenzeni nasesandleni esisekelayo. Njengomthetho, kule ndawo isikhundla sokudubula sizophendulela kancane ukuya kwelitshe.
Ukufeza ukudubula, isandla sokunene sihlanganisa ngokufana nomhlaba, futhi sisekela ikhanda, ukuze sikwazi ukuqondisa umlilo ohlosiwe.
Uma konke ukuqhutshwa kwenziwa ngendlela efanele, umshayeli webhalobha akazizwa engakhululekile futhi angahlose ukudubula.
Ngezansi kukhona amathiphu awusizo kusuka kubafundisi:
Uma ulwa, akukhuthazwa ukudubula ngokuphelele i-cartridge. Kubalulekile ukuthuthukisa lokhu esigabeni sokufunda. Ngokushesha nje lapho amacala esiphelile - shintsha isitolo.
Ukuqinisekisa ukuvikelwa ngesikhathi noma ukuhlaselwa okusheshayo, yenza umkhuba wokukhipha isibhamu ku-holster ngenye indlela.
Ngisho nokushaya ngokusheshisa okukhulu akunciphisi i-trigger ngokuzonda, uzama ngenqubo ukulungisa ukunemba nokuchithwa komlilo.
Ukudubula ukuqeqeshwa kufanele kwenziwe kuphela ezindaweni ezenzelwe le njongo.
Ukuze uthuthukise ngokushesha, qala ngezindawo ezincane ukuya kwelitshe, kancane kancane ukwandisa ibanga ngemuva kokufinyelela umphumela oyifunayo.
Amaphutha ajwayelekile ekudubula
Iziphambeko zivame ukuvela lapho zihloswe. Lokhu kungenxa yokufaka okungalungile kokubona kwangaphambili kulesi sikhwama. Ukunemba kokudubula kuzothuthukisa.
Uma inkokhelo iwela ngaphansi kwekhasi, ingxenye engaphezulu yezimpukane ikhona ngaphansi kwemiphetho ephezulu yehlosi. Uma isibhamu sishaya ngenhla phakathi nendawo - phezulu kwendiza yayingaphansi komkhawulo ophezulu we-slot. Uma ushaywa ngakwesobunxele noma ngakwesokudla kwesikhungo sehlongo, inhlanzi yafakwa kusukela ohlangothini olulodwa noma ngakolunye uhlangothi lwesigcawu sekhanda.
Enye iphutha ejwayelekile ekudubula - lokhu kuphonsa isandla ekukhaleni, okuholela ekuhambeni okufanayo. Konke kuncike lapho isandla sithatha khona ngemuva kokudubula. Kulokhu, kubalulekile ukulungisa umgomo ongenhla noma ngezansi.
Uma ubambe isikhali, kusasele amaphutha amaningi:
Uma le nhlamvu isondela eduze nehlangothi elidumile, amandla amakhulu kakhulu aqaphele lapho isithupha sigxiliwe esibambini noma lapho i-trigger icindezelwa lapho i-trigger icindezelwe.
Uma ngabe icala lishaya ekhoneni elingezansi elingakwesokudla, kubonakala sengathi ibhasikili liqinile ngokucindezelwa uma lisusiwe noma lidonsa kanzima yi-trigger.
Uma le bullet ihlasela ekhoneni elingenhla lehlosi, lokhu kungabonisa ukulindela kokuthola noma ukungalawulwa komugqa womlilo.
Ngemuva kokuthi ufunde ukuphatha isikhali, ungakhohlwa ngokuphepha kokusetshenziswa kwayo. Ukudutshulwa komsindo wesibhamu kungabesabisa abanye abantu, ngakho sebenzisa impi noma inkinga ye-pneumatic ezindaweni ezikhethekile (i-glades elungiselelwe, igalari yokudubula). Uma ulandela ngokucophelela zonke izidingo, khona-ke noma yimuphi umuntu angaba ngumshayeli wokudubula omuhle futhi azinike yena nabantu bakhe ngokuphepha.
"Vintorez" VSS: izici zobuchwepheshe. Rifle BCC "Screwdriver": idivaysi
Izimpawu zensimbi ebandayo kanye nesigaba sayo. Ngaphansi kwaziphi izimo ummese awuyona insimbi ebandayo
Capricorn: usuku lokuzalwa. Amatshe-nama mascots ngoba Capricorn
I-gravy ye-pasta njengendlini yokudlela: incazelo yokulungiselela kanye nezithako
"Izingibe Zokufihla Ukuthi" DML-Team Update MySQL
"Dexon" imithi. Yokusetshenziswa
Lokuvimbela Inzalo "NuvaRing." Imiphumela emibi kanye contraindications